PRADEEP BASHYAL: सेक्स टुरिजम
एकनासले मेरो वरपर छाएको सन्नाटा अचानक मोवाइलको घण्टीस“गै भंग भयो । साथी सर्वेस रहेछ र्। आज कतै फ्रेस हुन जाऔं भाई ।’ उसले सिधै प्रश्न ग¥यो । झ्यालमा हल्लिरहेको रेशमी पर्दा हटाएर बाहिर हेरे“ । बाहिर सडकमा सा“झको रमाइलोले प्रवेश पाइसकेको थियो । सदा रमझम र छलफलमै बिताउने पंक्तिकारको मन घरभित्रको एक्लोपनबाट निस्कन चहान्थ्यो । मात्र बाहाना चाहिएको थियो । प्लसटु सकिएपछी त अझ साथीहरुस“गको नियमित भेटघाट ठप्पप्रायः भएको बेला उसको त्यो आग्रहलाई म नकार्ने मुडमा थिइन । मस“ग त्यसबेला त्यतिसारो पैसा नभएको उसलाई बताए“ र्। मे हु“ ना भाई ।’ उसले जसरी भए पनि मलाई लैजान चहान्थ्यो । घरमा दिदीलाई सोधें । उसले कारण नै नसोधी अनुमति दिई । २०१६ को ओलम्पिक ब्राजिलमा हुने निर्णय हु“दैगर्दा उसको खुसीले सीमा नै नागेको थियो । बिए सक्नै आंटेकी ऊ अबको २ बर्षपछी अमेरिका पढ्न जाने योजनामा छे । सिकागो सहर प्रतिसपर्दाबाट पहिले नै हटेता पनि नजिकैको ब्राजिल छनौट भएकोमा पनि उसलाई केही भन्नु छैन र्। त्यती त म एकदिनको प्लेनमै पुग्छु ।’ ऊ भन्दैथिई ।
केहीबेरमै हामी दुई बाइकमा सवार भयौं । तर डेस्टीनेसन मलाई थाह छैन । म मात्र साथीस“ग निस्कन पाएकोमा फुरुंङ्ग छु । आज बिहान उसले एउटा पत्रिका पढेछ र्। यो त आठौं आश्चर्य भएन र ?’ मैले भनें । पत्रिकाका समाचार पढ्नु उसको सोख होइन । तर पनि उसलाई आज एउटा खबरले भने राम्रैस“ग आकर्षित गरेछ । एकजना मन्त्री शरदसिंह भण्डारीले यौन पर्यटनको पक्षमा दिएको अभिब्यक्ति उक्त समाचारको बिषय थियो । जसमा मन्त्री भन्दैथिर्ए केही निश्चित मापदण्ड बनाएर यौन पर्यटनलाई सरकारले मान्यता दिनुपर्छ ।’ जसले उसको त्यस बिषयमा रहेको चासोमा क्याटलिस्टको काम गर्नेछ । त्यसैक्रममा आज एउटा यौनकर्मी केटीस“ग मलाई भेटाउन खोज्दैछ ।
सा“झपख ठमेलमा चहलपहल बढ्दैगर्दा हामी त्यहीको एउटा पुरानो घरमा पस्छौं । छिर्ने ढोका पनि निकै सा“घुरो छ । भित्रपट्टी हल्कामात्र उज्ज्यालो छ । केही केटीहरु । सायद हामीलाई देखेर उनीहरु आत्तिए । सर्वेस पनि पहिलो पटक थियो त्यहा“ । तर त्यहा“बारे अपडेटेड भने त्यहा“ आउनेहरु भन्दा बढी नै । उसले पैसा बुझायो । म भने आत्तिन्छु । जे होला जेखाजाएगा । म समालिन खोज्छु । उसले केटी रोज्यो । मैले भने अगाडी जो थिइ उसैलाई भने । एकैछिनमा म एउटी अपरिचित केटीस“ग एउटा सांगुरो कोठमा छु । निकै फोहर ओच्छ्यान । यत्रतत्र बियरका बोतल र चुरोटका ठुटाहरु । पान मसालाले रंगिएका भित्ताहरु । म धेरै त्यहा“ बस्न सक्दिनथें । तर त्यहा“ लगानी भएको तीन सय दश रुपया“ म त्यसै खेर जान दिने मुडमा पनि थिइन र्। अनि सेक्स ? ’ तपाई सोच्नुहोला । त्यो त त्यहा“भित्र पुगेपछी मेरो मनबाट नै हराइसकेको थियो । मेरो बुझाइको सेक्स र त्यहांको परिवेश भिन्नै थिए । म छेवैको कुर्चीमा बसें । ऊ अचम्म परी र्। छिटो ल । अहिले फेरी साहु कराउंछ ।’ म मुस्कुराएं मात्र । मैले आफ्ू त्यहा“ आउुनुको अभिष्ट बताएं । नाम, घरबार, बेश्यालयसम्मको यात्रा.....नानाथरी । हामी केहीबेर गफियौं र्। नाम नलेख्नु नि ।’ उनले भनिन् । त्यसबिचमा ठमेलको यौन जीवनबारे धेरै कुरा भयो ।
उनको यो तेस्रो ठाउ“ थियो र्। तपाईं सोच्नुहोला यहा“का राम्रा होटमा त यस्तो नहोला नि ?र्’ अनि के त ?’ म जिज्ञासु बने र्। म पहिले यहींकै ठूलो लजमा काम गर्थें । केही दिनका लागि पहिल्यै बुकिङ्ग गर्थे मलाई । ’ उनले आफ्नो रामकहानी सुनाउन थालिन् । उनका अनुसार ठमेल टुरिस्टप्वइन्ट हुनुको कारण यहा“को सेक्स टुरिजम नै हो । धेरै बिदेशी नागरिकस“ग रात काटेका प्रशस्तै अनुभव रहेछ । रसुवा जिल्ला घर बताउने उनको किशोरावस्था जान्न चाहें म । ठ्याक्य इलेभेन मिनेटकी बेश्या पात्र मारियाको जस्तै । जुन उपन्यास म एकरात नसुति सकेको छु । लभमा ट्रेजिडी र सेक्सुअल फ्रस्टेसन । के सबै प्रोस्चिचिउटको कहानी एउटै हुन्छ ? म उपन्यासकार पाउलो कोइलोलाई सम्झें । जसले अहिले उनको परिचय बनेको छ प्रोस्चिचिउट बाई प्रोफेसन ।
सर्वेसले अघि गरेका कुरा मेरो मनमा बल्ल घुमिरहेको छ । नेपाल आउने पर्यटक अब मात्र यहा“को प्रकृतिले मोहित छैनन् । यहा“ नजानिदों पाराले सक्स पर्यटनको बिकास भइरहेको छ । उनका अनुसार यहा“का अन्तर्राष्ट्रिय लिंक भएका होटल र ट्रेकिङ एजेन्टले यहा“ आउनुपूर्व नै आफ्नो मेनुमा सेक्स समेत देखाउंछन् ।
८० दशकमा हिप्पी टुरिजमको बिकासस“गै नेपालले पनि खुलापन अंगाल्न थाल्यो । सेक्स टुरिजम सायद त्यसैको एउटा उपज हो । चाहे त्यसमा बिदेशी लागुन् या नेपाली नै । पोर्नोग्राफिक मेटेरियल्स हेर्न अब कुनै अरु देश धाउनुपर्दैन । प्रविधिले आफ्ना मोवाइलभित्रै यसलाई सुलभ बनाइदिएको छ । डान्सबार र क्याबिन रेष्टुंरामा बालबालिका सम्मको पहू“च छ । पश्चिमा समाजबाटै सिकेको यस कुराको अब उनीहरुजस्तै ब्यावस्थापन गर्न पनि सक्नुपर्छ । अन्य बिकल्प पनि छैन । केही निश्चित ठाउ“लाई रेडलाइट एरिया घोषणा गरियोस् । बाहिर कडा गरियोस् । कम्तिमा १८ बर्ष नपुगुन्जेल केटाकेटीलाई अश्लिल स्रामाग्रीबाट परै राखेर यौन शिक्षा दिन सके यौन पर्यटनलाइ्र्र सरकारले मान्यता नै दिएपनि आकासै खस्ने अवस्थाको सिर्जना हुने छैन । तन्नेरीहरु यौनजन्य क्रियाकलापमा लाग्छन् जसलाई दबाउन सकिंदैन । प्रचण्डले जसरी जनताको तागतलाई संसारको कुनै शक्तिले दबाउन सक्दैन भन्छन् हो यौनलाई दबाउन खोज्नु पनि त्यस्तै हो ।
सर्वेसले मिसकल हान्यो । म बाहिर निस्कें र्। उसको हालत पनि मेरो झैंभएछ ।’ तर म भने खुसीनै थिएं । कमसेकम थप केहीसमय सम्मका लागि म भर्जिन नै रहें ।
Copied from Hello Shukrabar,ayouth suppliment on KANTIPUR daily via www.ekantipur.com
written by Admin at 12:44 AM